Sidan ayuu Liiska Dawooyinka ee Qaranku adiga kuugu saameynayaa • E-hälsomyndigheten
Tjänster Tjänster för privatpersoner E-recept Så höjs patientsäkerheten Så skyddas din receptinformation Sidan ayuu Liiska Dawooyinka ee Qaranku adiga kuugu saameynayaa
Sidan ayuu Liiska Dawooyinka ee Qaranku adiga kuugu saameynayaa
Waxaad boggan ka akhrisan kartaa cidda arki karta waxa uu dhakhtar kuu qoray ee aad farmasiiga ka qaadatay. Waxaad sidoo kale ogaan doonataa sida aad saameyn ugu yeelaneyso macluumaadka daryeelka caafimaadka iyo bukaanka iyo farmasiiga la tusaayo.
Waxaad arki kartaa daawooyinka iyo waxyaalaha kale ee laguu qoray ee aad farmasiiga ka soo qaadatey, kuwaas oo uu ka mid yahay adeegga dhijitaalka ah ee Läkemedelskollen. Laga bilaabo 1 Maajo 2021 ayay fududaan doontaa in macluumaadkaas shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo bukaanka lala wadaago markaad daryeel caafimaad raadsaneyso. Waxa uu macluumaadku ku jiraa diiwaanka Liiska Dawooyinka ee Qaranka.
Ma dooran kartid inaan warqadda dawada ee dhakhtarku qoro iyo waxaad qaadatay laga diiwaan galliyo Liistada Daawooyinka ee Qaranka. Waxaanad sidoo kale dooran karin inaan macluumaadkaaga heerka kharashka badan (högkostnadsuppgifter) lagu qorin. Sidaa darteed ayaa in macluumaadkaaga la ilaaliyo shuuruudo adaga la saarayaa – kaliya shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo shaqaalaha farmashiyaha ee ogolaanshaha u haysta ayaa arki kara macluumaadka warqadda dawada ee dhakhtarku qoro iyo waxaad qaadatey.
Bogga ka hel
Markaad daryeelka caafimaadka iyo bukaanka booqaneyso
Markaad farmashiiga booqaneyso
Waxaad isticmaali kartaa Läkemedelskollen
Shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo bukaanku waxay u baahan yihiin inay ogolaanshaha saxda ah haystaan si ay ugu arkaan macluumaadkaaga warqadda dawada ee dhakhtarku qoro iyo waxaad qaadatey ugu eegaan. Waxay sidoo kale u baahan yihiin adiga oggolaanshahaaga si ay macluumaadka ugu eegaan. Ogolaanshaha waxaad siin doontaa dhakhtarka, kalkaalisada caafimaad, dhakhtarka ilkaha ama shaqaalaha kale ee daryeel caafimaadka. Xaaladaha qaarkood ayay si kastaba ha noqotee macluumaadka arki karaan, tusaale ahaan markaanay adiga ogolaanshahaaha ku weydiisan karin, tusaale ahaan haddii aad miyir beesho/suuxsan tahay.
Qofka bukaan daws loo qoray qaata ah ayaa waxa khuseeya xeerar kale oo aan aheyn kuwa bukaanka kale loogu talogalay.
Haddii aadan rabin inaad ogolaanshahaaga bixiso
Adiga ogolaanshahaaga la'aantiis ayaa shaqaalaha daryeel caafimaadka iyo bukaanka ee loo ogol yahay uu arki karaa haddii daawooyin gaar ah labadii sano ee la soo dhaafay laguu qoray. Taasi waxa weeye si ay shaqaalaha daryeelka caafimaadku iyo bukaanku ugu helaan fursad ka balaaran oo ay ku aqoonsanayaan ugaga hortagayaan qalad u isticmaalka dawooyinka, tusaale ahaan daawooyinka noocyada daroogada ah.
Haddii aad rabto inaad macluumaadka daryeelka caafimaadka iyo bukaanka ka qarisid
Waxaad xaq u leedahay inaad shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo bukaanka ka qarisid warqadda dawada ee dhakhtarku qoro iyo waxaad qaadatey ee gaarka ah. Markaas ayaan macluumaadka la tuseynin shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo bukaanka, markaad ogolaato inay arki karaan warqaddaada dawada ee dhakhtarku qoro iyo waxaad qaadatey. Hase yeeshee waxay arki karaan inay macluumaad aad qarisay jiraan.
Waad isticmaali kartaa Läkemedelskollen si aad macluumaad ugu qariso Liiska dawooyinka ee qaranka. Waxaad marka aad doonto dooran kartaa in macluumaadka dib loo tusi karro.
Xitaa haddii aad macluumaadka qariso ayaa shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo bukaanka la tusi karaa, tusaale xaaladaha soo socda:
haddii aad ku jirto xaalad degdeg ah oo aadan ogolaanshahaaga bixin karin
haa aad bukaan daws qaata tahay
haddii macluumaadku ay ku jiraan diiwaankaaga bukaanka – waxaad u baahan tahay inaad sidoo kale macluumaadka ku jira diiwaankaaga caafimaadka qariso si aanay shaqalaha daryeelka caafimaadku iyo bukaanku ugu arag kaas.
Ma katar ayey noqon kartaa in macluumaadka dawooyinka la qariyo
Haddii dhakhtarkaagu aanu macluumaadka dawooyinkaaga arki karin ayay adkaan kartaa in la iska ilaaliyo in daawooyinka is khilaafa ama falcelin xun wada sameeya. Waxay taasi micnaheedu tahay inay khatar noqon karto in macluumaad la qariyo. Haddii aad qariso warqaddaada dawada ee dhakhtarku qoro iyo waxaad qaadatey waa inaad adigu shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo bukaanka dawooyinkaaga u sheegtaa si ay kuugu siiyaan daryeel wanaagsan oo suggan.
Qari warqadda warqadda dawada ee dhakhtarku qoro ee warqadda caadiga lagu qoray
Waxaad qarin kartaa waxyaalah la qaatey ee lagu sameeyey warqadda dawada ee dhakhtarku qoro ee warqadda caadiga ah lagu qoray si aanay shaqaalaha daryeelka caafimaadku nidaamyadooda ugu arki karin.
Laga bilaabo 1 Maayo 2021, ayaa warqadda dawada ee dhakhtarku qoro ee warqadda caadiga ah lagu qoro laga diiwaan galinayaa Liiska Daawooyinka Qaranka taas oo ay waxyaalo dhif ahi ka reeban yihiin, ka hor intaan daawooyinka la bixin. Si aad u qariso waxyaalahaas la qaatey ayaad ugu baahan tahay inaad qariso warqadda dawada ee dhakhtarku qoro ee wax lagu qaatey.
Markaad farmasii booqato
Si ay shaqaalaha farmasiigu alaabtaada kuugu siiyaan ayay had iyo jeer ugu baahan yihiin inay arki karaan warqaddaada dawada ee dhakhtarku qoro iyo waxaad qaadatey, laakiin adiga ayay u baahan yihiin si ay ugu arkaan sababta daaweynta ee warqadda daawada laguugu qoray.
Waad qarin kartaa sababta daaweynta
Waad ku qarin kartaa macluumaadka khuseeya sababata daaweynta ee warqaddaada dawada. Haddii shaqaalaha farmashiyuhu u arkaan inay u baahan yihiin inay arkaan sababta daaweynta arkaan si ay alaabtaada kuugu siiyaan, ayay adiga kaa rabaan oggolaansho dheeri ah.
Warqaddaada daawada waxa ku jiri kara sababta daaweynta iyo ujeedada daaweynta. Waxaad kaliya qarin kartaa sababta daawaynta ee warqadda daawada ku qoran. Shaqaalaha farmasiga ayaa weli arki kara ujeedada daaweynta.
Markaad talo ku saabsan isticmaalka dawadaada weydiisato
Haddii shaqaalaha farmasiigu ay rabaan inay arkaan warqaddaaada daawada ee laguu qoro iyo waxaad qaadatey si ay talo kuugu siiyaan iyagoo oo aan waxba ku siineynin, ayay markaa shaqaalaha farmasiigu u baahan yihiin oggolaanshahaaga. Sababta daaweynta ee warqadda dawada laguugu qoray ayaan marna la is tuseynin talo bixinta.
Haddii aad shaqaalaha daryeelka caafimaadka ka qarisay warqad dawada ee dhakhtar kuu qoray iyo waxa lagu qaatey warqada dawada, ama haddii wax qaadashada lagu sameeyey warqada dawada ee dhakhtarku qoray ee warqada caadiga ah lagu qoray ayaan sidoo kale taas la tusi karin shaqaalaha farmasiiga marka talobixin la weydiisto.
Waad isticmaali kartaa Läkemedelskollen
Waxaad siyaabo kala duduwan ugu ku arki kartaa macluumaadka ku saabsan warqaddaada dawooyinka ee dhakhtarku kuu qoro iyo waxaad qaadatay: adigoo farmasiiga ka soo daabacanaaya, farmasiiga adeega elegtarooniga ah leh iyo adeegga dhijitaalka ah ee Läkemedelskollen. Waxaad sidoo kale Läkemedelskollen ka qarin kartaa macluumaad. Waxaad marka aad doonto dooran kartaa in macluumaadka dib loo tusi karro.
Waxa si fudud loo odhan karaa inay Läkemedelskollen tahay daaqad laga arkaayo Liistada dawooyinka ee Qaranka. Qofka ugu yaraan 18 sano jirka ah ee aqoonsiga elegtarooniga ah haysta ayaa waxyaalahan soo socda ka sameyn kara Läkemedelskollen:
inaad aragto dawooyinka aad adigu, carruurtaada ka yar 13 jirka ama adiga xawayaanka guriga la idiinku qoray warqadda dawada ee dhakhtarku qoro
aad aragto waxa farmasiiga ka qaadatay
aad maarayso oo aad diiwaangelinta oggolaanshaha arrimaha farmasiga khuseeya
aad ka fiiriso inta kuu hadhsan ilaa iyo inta ay bilaabmeyso qiimodhimista xadka kharashka badan kaa ilaaliyaa
aad ka soo qaado nuqul ku saabsan macluumaadka adiga kugu saabsan ee ku jira diiwaanka Liiska Dawooyinka ee Qaranka iyo Receptdepå Djur.
Waxa Läkemedelskollen la soo galayaa iyadoo la soo maraayo 1177 Vårdguiden ama bogga internedka ee E‑hälsomyndigheten.
Haddii aanad haysan fursad aad Läkemedelskollen ku isticmaalayso, ayaad la xiriiri kartaa E hälsomyndigheten si aad uga dalbato in xog ku jirta Liistada dawooyinka ee Qaranka la qariyo. Markaas ayaad heli doontaa foom aad buux buuxiiso oo aad E-hälsomyndigheten dib ugu dirto. Emayl u soo dir registrator@ehalsomyndigheten.se haddii aad dooneyso inaad foom dalbato Waxa sidoo kale la sameyn karaa in la naga soo waco 0771-766 200.
Macluumaadku waxa uu noqon karaa mid ka qarsoon daryeelaha iyo masuulka
Shaqaalaha daryeelka caafimaad iyo bukaanka ee inay dawo qoraan oggolaansho u haysta ayaa qarin kara macluumaadka ku saabsan warqadda dawada ee dhakhtarku qoro ee qof da'yar ah loo qoray taas oo sir hayantu ay sabab u tahay. Macluumaadka soo socda ayaa laga qarin karaa masuulka iyo wakiilka qof da'yar ah:
warqadda daawada ee dhakhtarku qoro iyo waxa warqadda lagu qaatey ama mustaqbalka lagu qaadan doono
dhammaan wax kasta oo lagu qaatey warqadda daawada dhakhtarku qoro ee warqadda caadig ah.
Macluumaadka ayaa laga qarinayaa masuulka iyo wakiillada iyadoo aan farmasiigana laga soo daabaci karin Liisada Dawooyinka ee Qaranka, iyadoo aan loo eegin cidda rabto inay aragto. Waxay taasi sidoo kale khusaysaa waxyaabaha kale ee adeega elegtarooniga ah laga soo daabacanaayo.
Diiwaanka cidda soo gashay ayaa muujinaya cidda aragtay macluumaadkaaga
Waxaad Läkemedelskollen ka heli doontaa xogta laga qoray cida aragtay. Halkan waxaad ka arki kartaa macluumaadka ku saabsan goorta, sababta, doorka xirfadeed iyo meesha uu qofku ka soo arkay macluumaadka ku saabsan warqaddaada dawada ee dhakhtarku qoro iyo waxaad qaadatey.